Araho ireo fitsipiky ny etikety ireo rehefa mandeha any Japon
Home » Lahatsoratra farany farany » Hostpost » Araho ireo fitsipiky ny etikety ireo rehefa mandeha any Japon
fitsipi-pitondrantena fitsangatsanganana ao Japon
Toerana mahafinaritra hitsidihana i Japon, indrindra noho ireo mponina ao aminy izay sariaka sy mandray olona. Na izany aza, takatray fa mety hanahirana anao ny manitsakitsaka fitsipika tsy nahy mandritra ny fitsidihanao. Rehefa dinihina tokoa, tsy azonao atao ny mahafantatra tsara ny fomba amam-panaon'izy ireo. Ary, amin'ny tranga maro, izany dia mety hiteraka toe-javatra mampino na mahamenatra na mahamenatra.
Amin'ity lahatsoratra bilaogy ity dia mizara torohevitra tsara izahay mba hahafahanao mifangaro amin'ny vahoaka rehefa mitsidika Tokyo na Kyoto.
Mangina! Mijanona mangina amin'ny fitateram-bahoaka
Ity misy torohevitra lehibe iray. Aza manao zavatra mafy rehefa mandray fitateram-bahoaka any Japon ianao. Ny tabataba rehefa mandeha fitateram-bahoaka dia zavatra hitan'ny Japoney ho tsy mahalala fomba. Tandremo sao tsy miresaka mafy amin'ny namanao ianao, na mifampiresaka amin'ny telefaona, na avelao ny mozika hipoaka amin'ny telefaonanao. Raha mila izany ianao dia mila malina rehefa mampiasa findainao hiantsoana haingana. Ny Japoney dia mihevitra ny fitateram-bahoaka ho toerana iray hiala sasatra aorian'ny hatsembohana azy tontolo andro; mahita mpandeha tabataba izy ireo manelingelina.
Ankoatr'izay, misy lalàna hafa momba ny mampiasa fitateram-bahoaka izay tokony hoheverinao. Aza manalalaka habaka bebe kokoa noho ny ilaina rehefa mipetraka. Jereo koa ny lokon'ny fiaran-dalamby itehirizanao: Japana dia natokana ho an'ny vehivavy manokana.
Tsy mihinana eny an-dalana any Japon
Raha betsaka Masinina mpivarotra 5 tapitrisa dia miparitaka manerana an'i Japon. Toa maka fanahy ihany izany, sa tsy izany? Mora kokoa ny manadio ny hanoanana rehefa mandeha satria afaka manaikitra isaky ny maniry. Na izany aza, mila atsipazo ao anaty fitoeram-pako ireo kaontenera tsy misy poizina apetraka eo akaikin'ny masinina mpivarotra. Tokony homarihinao fa ny mihinana na misotro amin'ny fitateram-bahoaka dia heverina ho tsy mahalala fomba ao Japon. Azonao atao anefa ny mihinana sakafo mandritra ny dia lavitra.
Mifikitra amin'ny fitsipiky ny escalator
Mety ho fantatrao ny sasany amin'ireo lalàna raha avy amin'ny tanàna be olona toa an'i New York na London ianao. Misy lalàna manokana momba ny fitondrana escalator any Japon, ary ny Japoney raha fifehezana be dia be, ho hitanao izy ireo manaraka ireo fitsipika ireo na aiza na aiza. Raha te hijoro ianao dia tazomy eo ankavanan'ny escalator. Raha mandeha foana dia mijanona amin'ny ilany ankavanan'io. Raha sanatria dia ny lafiny ankavanana haingana dia haingana, tandremo sao misy olona ao aorianao mitady handingana anao. Mety hiafara amin'ny filaharana lava ny olona manantena fa avelanao handalo izy ireo satria mahalala fomba loatra ka tsy handalo anao.
Tandremo ny fomba fiasan'ny taxi ao Japon
Ny fotodrafitrasa fitateram-bahoaka any Japon dia malaza indrindra, ary manoro hevitra anao izahay hampiasa izany raha mbola any Japon ianao. Na izany aza, mety mbola hiafara amin'ny fiafaranao ianao maka taxi. Malaza amin'ny fahaizany ara-teknolojia i Japon. Ny taxi-be koa dia mampiseho ny fandrosoana ara-teknolojia mahafinaritra nataon'ny firenena. Raha tsy ao anaty vondrona ianao dia mipetraha amin'ny seza aoriana amin'ny taxi. Izay no fanaonao matetika, sa tsy izany? Tano, ity ny trondro. Misokatra ho azy ireo ny vavahadin'ny taxi ho an'ny mpandeha. Aza manandrana mamoha varavarana ny tenanao. Raha vantany vao miditra ianao dia hanidy ny varavarana ny mpamily.
Ny filaminana no laharam-pahamehanao
Rehefa mandeha ianao dia tena azo inoana fa hijery ny telefaoninao hanampiana anao hivezivezy. Miverina any amin'ny hotely ianao dia azonao atao ny mampiasa ny solosainao findainy hanaovana asa na mandefa fizarana vaovao amin'ny seho tianao indrindra. Ireo hetsika roa ireo dia mitaky fifandraisana internet. Ny vidin'ny roaming dia mety ho lafo be. Araka izany, ahoana no hialanao amin'ny vidiny lafo mandritra ny dianao? Mety hividy karatra SIM eo an-toerana ianao izay tokony ho ampy amin'ny sasany amin'ireo zavatra ilainao. Mazava ho azy, azonao atao ihany koa ny mifikitra amin'ireo toerana mafana Wi-Fi ampahibemaso omen'i Japon maimaim-poana. Ao amin'ny trano fandraisam-bahiny misy endrika tandrefana dia mety homena Wi-Fi maimaim-poana. Na izany aza, ny hotely avo lenta dia mety mitaky fandoavana ny fidirana amin'ny Internet. Raha misafidy hotely na trano fandraisam-bahiny amin'ny faritra lavitra ianao, dia mety tsy ho ao amin'ny lobby ihany no misy Wi-Fi.
Na dia mety ho toa fahasoavana mahavonjy aza ny Wi-Fi amin'ny toe-javatra sasany, dia mampidi-doza kokoa noho ny eritreretinao izany. Mety tsy ho voaaro tsara ny toerana ipetrahana Wi-Fi sasany, midika izany fa misy olona afaka mitsikilo ny asanao. Raha mikasa ny hanavotra ny tenanao amin'ireo fahasahiranana ireo ianao dia tsara ny mampiasa a Fampiharana VPN amin'ny solosaina findainao, telefaona, na takelakao. Ny tahirinao manokana sy ara-bola sarobidy dia mijanona ho azo antoka rehefa mamela ny fifandraisana VPN alohan'ny hifandraisana amin'ny Wi-Fi. Ny fitsangatsanganana any Japon na any amin'ny firenen-kafa dia tsy maintsy ho traikefa nahafaly ary azo atao izany rehefa miaro anao amin'ny fijirihana sy fangalarana data.
Mpizahatany 39.1 tapitrisa mahery isaky ny vazan'izao tontolo izao no nitsidika an'i Japon tamin'ny taona 2018, ary mbola eo an-tampon'ny lisitra ho an'ireo mpandeha maro izy io. Zava-dehibe ny mianatra momba ny kolontsaina, ny tantara, ny fomba amam-panao eo an-toerana, ary ny olona ao amin'ny firenena iray alohan'ny hitsidihany azy, ary tsy misy hafa amin'izany Japon. Tena mankasitraka ireo olona manaja ny kolontsainy sy ny fomban-drazany ny Japoney. Tsy manantena anao hahalala ny zava-drehetra momba ny fomba fiainany ny vahoaka Japoney. Na izany aza, raha maneho ny ezaka fanajana ny firenena sy ny mponina ao aminy ianao, dia azo antoka fa ho feno fitiavana sy fankasitrahana be dia be ianao. Ny toro-hevitra omenay dia tokony hanampy anao hifanaraka tsara any Japon. Fonosana ny kitaponao: mandray anao ny 'Land of the Rising Sun'!